Qaramada Midoobay oo sheegtay in South Sudan lacago badan hub siisato - BBC News Somali
Image caption Askar ka tirsan ciidanka dawladda South Sudan
Guddi khubaro ah oo ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa waxa uu dowladda South Sudan ku dhaleeceeyay in kharashaad badan ay ku isticmashay dhinaca milateriga xilli ay abaar ba'an ku dhufatay qeybo badan oo ka mid ah dalka.
Dagaalka sokeeye eek a taagan South Sudan ayaa galay sanadkii saddexaad.
Khubarada Qaramada Midoobay ayaa sheegay in dowladda South Sudan ay ugu yaraan kala bar miisaaniyadeeda ku isticmaasho ammaanka iyo hub, halka boqol kun oo qof ay u dhimanayaan macaluul inta badan ka dhalatay howlgaladeeda milateri ee ay dalka ka waddo.
Bishii la soo dhaafay qeyba ka mid ah gobolka Unity ee waqooyiga dalka ayaa waxaa loogaga dhawaaqay inay macaluul ka jirto.
Magaalada gobolkaa ugu weyn ee Leer oo ah halka uu ka soo jeedo hogaamiyaha fallaagada Riek Machar, ayaa ciidammada dowladda waxaa lagu eedeeyay inay gobolkaa ka gaysteen tacaddiyo ballaaran.
Khubarada Qaramada Midoobay oo weli aanan daabicin warbixintooda oo dhameystiran ayaa sheegay in Golaha Ammaanku ay tahay inuu dalkaasi South Sudan ku soo rogo cunaqabateyn dhanka hubka ah, taasina waxa ayba u muuqataa in aanay dhaceyn.